March 2011 ~ စန္ဒကူး
ဒီတစ်ခါတော့ချဉ်ပေါင်သီးအခြောက်လေးတွေကိုဖျော်ရည်ဖျော်သောက်ရအောင်။ ငယ်ငယ်တုံးကလမ်းဘေး တွန်းလှည်းသယ်မှာသောက်ဖူးတဲ့ဇီးဖျော်ရည်ချဉ်ချဉ်လေးနဲ့ခပ်ဆင်ဆင်ပါ။
ချဉ်ပေါင်ပင်အရိုးရောက်အရွက်ပါနီတဲ့အပင်ကိုတွေ့ဖူးကြလားမသိဘူး။ တစ်ချို့ကအိမ်မှာအလှစိုက်ပန်းပင် အနေနဲ့စိုက်ကြတယ်။ အဲဒီအပွင့်လေးတွေကြွေအသီးတွေသီးလို့ရင့်လာရင်အထဲက အဆံကိုထုတ် အခွံလေးတွေ ဘဲအခြောက်ခံပြီးသိမ်းထားလို့ရတယ်။ ဖျောရည်လုပ်တော့မယ်ဆိုမှ အဲဒီချဉ်ပေါင်သီးအခြောက်လေးတွေကို ရေလေးနဲ့တစ်ခါလောက်ဆေး၊ ဆားနဲနဲ (နည်းနည်းမှနည်းနည်း)လေးထည့်ပြီးရေနဲ့ပြုပ်ပါမယ်။
ပြီးရင်တော့ အအေးခံ။ သကြားရည်ထည့်၊ ရေခဲထည့်၊ ရေလိုသလောက်ထည့်ပြီးဖျော်ရုံပါဘဲ။ အရောင်လေးက လဲ နီနီရဲရဲလေးနဲ့ ချဉ်ပြုံးပြုံးလေး.. တစ်ခါသောက်မိရင် ကြိုက်သွားမှာသေချာတယ်။ ရင်လဲအေးတယ်ရှင့်။
ကျွန်မသူငယ်ချင်း ထိုင်းက အမကြီးဖျော်တိုက်တာပါ။ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူများရှိရင်စမ်းကြည့်လို့ရအောင် တင်ပေး လိုက်ပါတယ်နော်။
Posted by Sandakuu at 11:26 PM
ဆူးပုပ် (ထိုင်းကနေ ကိုင်းဖြတ်လေးတွေယူလာပြီးစိုက်ထားတာပါ၊ အညွန့်လေးတွေထွက်တဲ့ နေ့တုန်းက ဒီကမ္ဘာမှာအပျော်ဆုံးသူကိုယ်ပေါ့).. ဟီးးးး
ခရမ်းရောင်ညွန့် (အရသာက ဟင်းနုနွယ်လိုဒါပေမယ့်တစ်မျိုး၊ ရန်ကုန်မှာတော့မစားဘူး အစေ့ဘဲ ကလေးတွေဆော့တာ.. ဒါပေမယ့်ဒီမှာတော့သူများစားကြတယ်)
ပင်စိမ်း နှင့် မုန်ညှင်းဖြူ
မုန်ညှင်းစိမ်း / မုန်ညှင်းခါး
ခရမ်းသီး (SALMON ISLANDS စိုက်ခင်း)
Posted by Sandakuu at 8:55 PM
ကျွန်မငယ်ငယ်ကတည်းက ပထမဆုံးမာမီဝယ်ခိုင်းတဲ့ဟာက ဆီပါ။ ဆီတစ်ပုလင်းကို ၅၀၀ ကျပ်၊ ပိုက်ဆံ ၅၀၀ ပေးရင်ဆီတစ်ပုလင်းရတယ်။ ပိုက်ဆံပေးလိုက်ရုံဘဲ. မခက်ခဲ့ဘူး။
၁၀ တန်းအောင်တက္ကသိုလ်စတက်တော့ အဆောင်မှာနေတယ်၊ လိုတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန် မာမီက၀ယ်ပို့ ပေးတယ်၊ သူလဲ ၂ လနေတစ်ခါလာတယ်။ အဲတော့ မုန့်ဝယ်စားတာကလွဲ အသုံး ဆောင်တွေမ၀ယ်တတ် ခဲ့ဘူး။
နောက်ဆုံးနှစ်အရေးပေါ်လိုအပ်တာလေးတွေတော့ ဆိုင်မှာသွားဈေးမေးဝယ်လိုက်တာဘဲ။ သူငယ်ချင်းတွေဈေးဆစ်နေရင် သိပ်ရှက်တာဘဲ.. သူတို့နားကနေခွာခွာထွက်သွားခဲ့ဖူးတယ်။
ကျွန်မကတော့ လိုချင်တယ်ဆို ဈေးမေးတယ်၊ ကိုယ်မတတ်နိုင်ရင်မ၀ယ်ဘူး၊ ကိုယ်တတ်နိုင်တယ် ဆိုလဲ ဈေးမဆစ်တော့ဘဲ ၅ ကျပ် ၁၀ ပိုပေးရလဲဝယ်လိုက်တာဘဲ.
ဒါပေမယ့်အဲဒီအကျင့်ကလက်တွေ့မကျပါဘူး... ကျောင်းပြီးတော့ ရန်ကုန်ကိုပြန်လာတယ်.. မာမီက ဗိုလ်ချုပ်ဈေးသစ်က အန်တီကြီးဆိုင်မှာ အမျိုးသမီးအသုံးဆောင်တွေ လိုက်လိုက်ဝယ် ပေးတယ်. သူ့နောက်လိုက် သူဈေးဆစ်နေရင် ကျွန်မမှာ ဆိုင်ရှင်ကိုအားနာနေတာ..မျက်နှာ ဘယ်နားထား ရမှန်းမသိအောင်ဘဲ။
အန်တီကြီးကလဲသဘောကောင်း... အနော..အနော..သမီးလေးခေါ်လာတာကိုး..ဖိုးမူ...ချစ်စရာ လေး အန်တီဈေးလျှော့ပေးမှာပေါ့ဆိုပီး (နဲနဲ) လျှော့ပေးတယ်.. မာမီက သဘောတွေကျလို့။ သွားတိုင်းကျွန်မကို ခေါ်ခေါ်သွားတယ်။ကျွန်မစဉ်းစားတယ်.. ဈေးရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူ နဲနဲလေး တင်..နဲနဲလေး လျှော့ပေးရလိုက်မှ ပိုကျေနပ်ကြတာလား။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဈေးရောက်တယ်.. ကြိုက်ရင်ဝယ်လိုက်တာဘဲ..ဈေးကြီးလွန်းရင်တော့ ပြန်လှည့် ထွက်ခဲ့ တယ်၊ ပထမဆုံးဈေးဝယ်ထွက်တုံးက အာလူးဈေးကြီးလို့ တစ်လုံးဘဲဝယ်ပြီး ဆားဈေးပေါလို့ ၂ ပိသာလောက်ဝယ်လာတယ်.. မာမီက စိတ်ပျက်လို့ ဘာမှပြောဘူး။
အဲလိုနဲ့ ကျွန်မဈေးဝယ်တိုင်းကမောက်ကမဖြစ်တယ်.. ဒါကြောင့် စူပါmarket ဘဲ သွားတယ်။ ပိုက်ဆံရှိလွန်းလို့မဟုတ် ဈေးမဆစ်ရဲ ဈေးဆစ်ရမှာအားနာတဲ့ မွေးရာပါရောဂါကြောင့်။
ဒီကိုရောက်တော့ ဈေးမဆစ်လို့မရတော့ဘူး၊ စစ်ကူခေါ်ရအောင် အိမ်က လူတွေတစ်ယောက်မှ မရှိ။ သူငယ်ချင်းဆိုတာလဲ အမြဲကိုယ်နဲ့လိုက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။
ကံကောင်းချင်တော့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းကလဲ ကျွန်မလို ဈေးဆစ်ရမှာကြောက်တဲ့သူဖြစ်နေတာ.
တစ်ရက်သူက ဈေးသည်ကိုမေးတယ်.. "what is your last price?" တဲ့... တစ်ခါတည်းတန်း မေးတော့ ဈေးသည်ကကြောင်ပြီး... ကျွန်မက အော်ရီတယ်...
ကျွန်မသိသွားပြီ.. လျှော့ပါ လျှော့ပါလို့ သနားစရာအသံနဲ့ပြောနေစရာမလိုသလို..
သင့်တင့်တဲ့ဈေးကိုလဲခန့်မှန်း ဈေးသည်ကိုပြောပြီး ဈေးဝယ်သူမလျှော့နိုင်လှည့်ထွက်ရဖို့လဲမလို..
သူလဲအဆင်ပြေ..ကိုယ့် အားနာတဲ့ရောဂါနဲ့လဲ အဆင်ပြေမယ့်.. နောက်ဆုံးဈေးတစ်ခါတည်း တန်းမေး တော့တာဘဲ... လူတိုင်းက အဲလိုမေးခွန်းမေးလေ့မရှိလို့ အချို့ဈေးသည်တွေက ကြောင် တောင်တောင်ဖြစ်သွားသလို အချို့ ကလဲ နဲနဲစဉ်းစားပြီးမှ ရီပြီး.. ဈေးလျှော့ ပြောလာတယ်။
အခုလောလောဆယ်တော့ "what is your last price" နဲ့အဆင်ပြေနေပါကြောင်း...း))))
နောက်နဲနဲကြာရင်တော့ technique ပြောင်းရမယ်ထင်ပါ့။
Posted by စန္ဒကူး at 10:16 AM